Month: July 2020 - Page 42 - Kichuu
Statement On The Brutal Killing Of The Oromo Hero – Artist Haacaaluu Hundeessaa Oromia Global Forum 6909 Laurel Ave, Suite 5219 Tacoma Park, MD20913 Email: Jemal.sadik@mnpera.org Phone: 612-483-0161 Tuesday, June 30, 2020 We, the Oromia Global [Read More]
SAGALEE BOSONAA KMN:- Adoolessa 01/2020 Waraanni Bilisummaa oromoo waraana mootummaa gabroomfataa oromiyaa keessa teessuma ishee dhoorkuf gara kaampii ishee halelutti cehee jira. Haaluma kanaan mooraan waraanaa lixa oromiyaa sadi waraana Bilisummaa oromoo zoonii lixaatin tarkaanfin [Read More]
BBS: Bultum Broadcasting Services is live now. Waldaan Dargaggoota Oromoo Minisootaa artiist Haacaaluu Hudeessaa dhaa sirna yaadannoo qopheesse. Lammiiwwan Oromoo Yunaaytid Isteets, godinoota adda addaa keessa jiraatan ajjeefamuun artiisti Haacaaluu erga dhagahamee qabee aarii fi [Read More]
Imbaasii xophiyaa biyya UK tti argamu ERGAA GARAGARAA: Bilbilaan Kan na qaqqabe! 1. AMBOO: “Haacaaluun Finfinneetti boqochuu qaba” 2. SHAASHAMANNEE: “Namootni kaleessa rukutaman amma iyyuu karaa irra jiru. Namootni hedduminaan miidhamanii jiru.” 3. POOLISII OROMIYAA: [Read More]
At Least 52 Killed in Ethiopia Protests Over Singer’s Death By Reuters ADDIS ABABA —(Reuters)– At least 50 people were killed in Ethiopia’s Oromiya region in protests following the fatal shooting of a popular singer, a [Read More]